Ny Fivoriambe no hakarina ho eny amin'ny rahona hitsena an'i Jesosy eny amin'ny habakabaka | Apg29
Milaza ny Baiboly fa tokony hakarina ho eny amin'ny rahona. Mariho fa tsy mitsangana. Ny tari-dalana dia toy izany no izy.
Rehetra famonjena ny Fiangonana eto an-tany dia hakarina mba hitsena an'i Jesosy eny amin'ny habakabaka.
Tsy àry dia tokony tsy ho tafiditra ao amin'ny iray hankany Jerosalema, fa Ho hakarina ho eny amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka. Izany dia an'i Jesosy fa nijanona ny lamina izany isika, dia homba azy mandrakariva.
1 Th 4:17. Avy eo isika, izay velona ka mbola mitoetra no ho tratra ny hiaraka aminy ho any amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka . Ary toy izany koa isika, dia foana amin'ny Tompo .
Milaza ny Baiboly fa tokony hakarina ho eny amin'ny rahona. Mariho fa tsy mijoro izy . Ny tari-dalana dia toy izany no izy. Rehefa efa nijanona izy , dia hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka Jesosy. KJV dia nadika ho toerana.
Fa Jesosy, fito taona tatỳ aoriana, taorian'ny fampakarana ho avy indray eto an-tany dia mitondra ny fiangonana. Avy eo dia niverina ho any ny fiangonana (isika rehetra izay voavonjy, izay nahatratra azy) ho any Jerosalema.
Jod 1:14. Raha ireo Enoka koa, ilay fahafito nandimby an'i Adama, dia efa naminany, nanao hoe: Indro, ny Tompo dia tonga noho ny tsy omby alinalina ny olony masina.
Ao amin'ny fononteny, dia afaka manampy anao hahafantatra fa misy "tsy omby alinalina." Isika àry dia maro be voavonjy dia hiverina amin'i Jesosy!
Rahona sy ny rivotra ny zavatra isan-karazany
Mariho fa ny "rahona" sy "rivotra" Tsy mitovy izany. Raha efa toy izany, dia mety ho roa samy hafa ny teny ho azy. Ny rahona (rahona) manery antsika, saingy eny amin'ny habakabaka fa hitsena ny Tompo. Sa araka ny nadika ao amin'ny DIEM "toerana".
Io fahamarinana ara-baiboly, azoko tao am-poko ela fa mbola tsy nahita azy io ho toy ny mazava Vao haingana aho no nahita aho, rehefa mamaky io andininy io.
Manao ny trepunktslista Izy mba ho lasa miharihary kokoa.
Ho isika hakarina ho eny amin'ny rahona
Dia hihaona ny Tompo any amin'ny habakabaka.
Ary toy izany foana isika, dia ho any amin'ny Tompo.
Ary ny lafiny fahefatra azoko ampiana hoe:
Tonga i Jesosy, rehefa niverina tany Jerosalema, dia miaraka amintsika aloha no hasandratra!